China nylon pulley natao ho an'ny orinasa mpamokatra ascenseur sy mpamatsy | H & F.nylon
Ny nilona elevator pulley dia nampiasaina tamin'ny fitaovan'ny ascenseur nandritra ny am-polony taona maro noho ny fahamendrehana ny tenany, ny lanjany maivana ary ny fiarovana ny tady tariby. Maherin'ny 80% ny pulley ascenseur mampihatra fitaovana nilona ary afaka mahazo fiainana asa fanompoana bebe kokoa amin'ny fitaovana rehetra. Ary satria voafehin'ny governemanta bebe kokoa amin'ny indostrian'ny vy ny fahalotoany amin'ny tontolo iainana, hampiasaina amin'ny fitaovana ascenseur ny pulley nylon.
Ary manaraka izahay dia manolotra famaritana mahazatra momba ny pulley nylon elevator:
MC Nylon nampihatra tamin'ny pulley Elevator
Mihoatra ny 95% nylon Plus 5% akora hafa
∅140 ∅520 * * 100
∅140 ∅520 * * 110
∅520 ∅140 * 120 *
∅130 ∅520 * * 100
∅130 ∅520 * * 110
∅520 ∅130 * 120 *
∅110 ∅406 * * 100
∅110 ∅406 * * 110
∅120 ∅406 * * 100
∅120 ∅406 * * 110
∅130 ∅406 * * 100
∅130 ∅406 * * 110
Izahay, Huafu dia niezaka nitari-dàlana, nandresy lahatra ny mpanjifanay hanandrana ny fantsom-pitaovana Nylon fa tsy ny fantsom-by. Mpanjifa maro no zatra nametaka pulley nilona taorian'ny fitsapana ny antontan'isa rehetra momba ny kodiarana nylon. Tokony nifanaraka tamin'ny pulley nylon izy ireo teo amin'ny resaka nifanaovantsika tamin'ny mpanjifantsika. Ary nilaza izy ireo fa ny mpiasan'izy ireo dia maniry kokoa ny mametraka pulley nylon amin'ny fametrahana pulley nylon mampihena ny hamafin'ny asan'izy ireo, mamonjy ny fotoana fiasany hanaovana asa bebe kokoa. Ary afaka manana fotoana fitsaharana bebe kokoa amin'ny fametrahana pulley nylon izy ireo hanatsara ny fahombiazan'ny asa rehetra.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mihamaro hatrany ny mpanjifa manomboka mahatsapa ny tombony azo avy amin'ny nilon pulleys ary vonona kokoa izy ireo ny manandrana vokatra vaovao hanatsarana ny ambaratongam-bokin'izy ireo amin'ny lafiny fiarovana, fahafaha-manao, kalitao. Ary mino izahay fa nylon pulley dia hanana fampiharana bebe kokoa amin'ny indostrian'ny ascenseur.
Previous: China Factory for Nylon Round Bar - nylon Pin misy henjana be - H & F.nylon
Manaraka: nylon fitaovana ho an'ny milina